Nalapani - Page 1702 of 1844 -
नेपाली पोसाकमै परिवारसँगै हेर्न नसकीने ९ तस्विर, आखिर को हुन् ज्योति मगर ?
नेपाली पोसाकमै परिवारसँगै हेर्न नसकीने ९ तस्विर, आखिर को हुन् ज्योति मगर ? काठमाडौ । ज्योति मगर अस्लिल हर्कतले चर्चा जमाई राख्ने एक पात्र हुन् । उनका अनेकौँ हर्कतहरु छन् । कहिले मदिराले मातेर देखाएको नृत्य चर्चामा छ त कहिले नग्न तस्विर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बन्ने हर्कत चर्चामा छ । उनका अधिकांश गीत हेर्ने हो भने आधा… Read More »
यो बर्षमा सर्वाधिक हेरीएको तीज गीत १० लाख बढिको नजरमा भिडियो सहित हेर्नुहोस
हिन्दु नेपाली नारीहरुको महान पर्व तीज भीत्रिए संगै बजारमा भिन्न भिन्न प्रकारका गीतहरु आइरहेका छन । यसै क्रममा यो वर्षको पहिलो तीज गीतको रुपमा बजारमा आएको एउटा जरुरी कुरा छ बोलको तीज गीतले यतिवेला सबैको मन जित्न सफल भएको छ । गीत बजारमा आएको केही समयमा नै १० लाख भन्दा वढिले गीतलाई मन पराइसकेका छन । अहिले सम्म… Read More »
पाल्पाको रानीमहल स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण
पाल्पा, १० साउन । सरकारले पाल्पास्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वको रानी महल स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । पुरातत्व विभागले ऐतिहासिक, पूरातात्विक तथा धार्मिक महत्वको रानी महल तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो । सरकारका तर्फबाट पुरातत्व विभागमा महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल र तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमारी शाहीले बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच रानीमहल हस्तान्तरणसम्बन्धि १० वर्षे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर… Read More »
टिमुरे पहिरो : ५ जनाकाे शव भेटियाे, १२ जना अझै बेपत्ता, नेपाल–चीन आवातजावत बन्द
रसुवा– रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा बुधबार राति गएको पहिरोमा परी ५ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म १२ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेहरुमा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी–४ का शुस खड्का, भोटेकोशी–५ का बिक्रम श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ र मंगल तामाङ तथा गोसाईकुण्ड–१, थुमनका मिंग्मर गोम्बो तामाङ रहेका रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए। सिडिओ पौडेलका अनुसार पहिरोमा परी… Read More »
बेइजिङमा अमेरिकी दूतावासबाहिर विस्फोट
चीनको राजधानी बेइजिङस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासबाहिर सानो विस्फोट भएको छ। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार एक व्यक्तिले दूतावास हाताबाहिर एउटा बम राखेका थिए। विस्फोटबाट बम राख्ने व्यक्ति मात्रै घाइते भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। विस्फोटपछि दूतावास वरपरको क्षेत्रमा सेतो धूँवाको मुस्लो देखिएको थियो। गतिविधि चिनियाँ समय अनुसार दिउँसो डेढ बजेतिर स्थानीयबासिन्दाले ‘चट्याङ परेको जस्तो आवाज’ सुनेको भन्दै सामाजिक… Read More »